DHAGEYSO: Xeer ilaaliyaha Qaranka oo Arrin halis ah ka sheegay Dacwadda Badda Somaliya iyo Kenya (Maxaa Cusub)? | HalQaran.com
DHAGEYSO: Xeer ilaaliyaha Qaranka oo Arrin halis ah ka sheegay Dacwadda Badda Somaliya iyo Kenya (Maxaa Cusub)?
Muqdisho (Halqaran.com) – Axmed Cali Daahir oo ah xeer ilaaliyaha Qaranka ayaa sheegay in Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay ka bilaaban doonto 9 Bisha soo socota dhageysiga Wareegga Koowaad ee Dacwadda badda ee ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Xeer ilaaliyaha Qaranka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay rajo badan ka qabto in ay ku guuleysato dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Wuxuu kaloo xusay, in mid labo maalmood la dhageysan doono Soomaaliya iyo Kenya ka dibna Maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto xukunka ah Cidda iska leh badda lagu muransan yahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa dooneysaa in cabbirka xadka badda si toos ah loola dhiririyo xadka dhulka, halka dowladda Kenya ay dooneyso in la weeciyo.
Dhulka ama Baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000km oo isku wareeg ah.
Maxkamadda Caalamiga ee Cadaalada
xeer ilaaliyaha Qaranka